नेपाल आज | बैठक किन लम्ब्याउँदै छन् देउवा ?
बैठक किन लम्ब्याउँदै छन् देउवा ?
पार्टीको नियमावली, अन्तरिम संरचनासहित पार्टीको अन्य एजेन्डा बैठकको भए पनि बैठकमा त्यसबारेमा खासै छलफल हुन नसकेको सहभागी नै बताउँछन्। बुधवारको बैठकमा अनुशासन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको र उपनिर्वाचनबारेमा निर्वाचन आयोगमा गएको कांग्रेस प्रतिनिधिले बैठकमा त्यसबारेमा जानकारी गराएका थिए।
जारी बैठक सुरु हुने क्रममा अन्तरिम संरचना निर्माणको टुँगोसँगै १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने इत्तर पक्षसँग देउवा सहमत थिए। तर बैठकमा पहिला संरचना पूर्णरूपमा निर्माण गरिसकेपछि मात्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने अडान कसे। त्यसपछि दुई पक्षबीच सहमति भएपछि मंसिरसम्ममा अन्तरिम संरचना निर्माणसँगै क्रियाशील सदस्यताको टुँगो लगाइसकेको कार्यतालिका बनाउने निर्णय भयो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको छ।